KEDU ESI MỤTA FPS NA EGWUREGWU AHỤ? IHE FPS KWESỊRỊ ỊBỤ MAKA EGWUREGWU DỊ MMA - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Kedu esi mụta FPS na egwuregwu ahụ? Ihe FPS kwesịrị ịbụ maka egwuregwu dị mma
Echere m na ihe egwuregwu ọ bụla (ọ dịkarịa ala, nwee obere ahụmahụ) maara ihe FPS bụ (ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nke abụọ). Ma ọ dịkarịa ala, ndị na-eche brakes na egwuregwu - ha maara n'ezie!
N'isiokwu a, m chọrọ ịtụle ajụjụ ndị kachasị ama gbasara ihe ngosi a (otu esi amata ya, otu esi eme ka FPS, ihe ọ ga-abụ ma ọlị, ihe kpatara ya ji adabere, wdg). Ya mere ...
Otu esi achọta FPS gị na egwuregwu ahụ
Ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe iji chọpụta ụdị FPS ị nwere bụ ịwụnye usoro FRAPS pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị na - egwu egwuregwu kọmputa - ọ ga - enyere gị aka mgbe niile.
Na nkenke, nke a bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịdekọ vidiyo site na egwuregwu (ihe niile na-eme na ihuenyo gị edere). Ọzọkwa, ndị mmepe emepụta codec pụrụ iche nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịbịnye ihe nhazi gị na mkpakọ vidiyo, nke mere na mgbe ị na-edekọ vidiyo site na egwuregwu ahụ - kọmputa ahụ anaghị akwụsịlata! Tinyere, FRAPS gosiri nọmba FPS na egwuregwu.
E nwere otu azụghachi na codec nke ha - vidio dị nnọọ ukwuu ma mesịa, ha ga-edezi ma gbanwee n'ụdị nchịkọta ụfọdụ. Usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ na nsụgharị ewu ewu nke Windows: XP, Vista, 7, 8, 10. Ana m akwado ka ị mara.
Mgbe ị wụnye ma na-ebupụ FRAPS, mepee akụkụ "FPS" na mmemme ahụ ma debe igodo dị ọkụ (na m na ihuenyo n'okpuru bụ bọtịnụ F11).
Bọtị iji gosi FPS na egwuregwu ahụ.
Mgbe ọrụ ahụ na-agba ọsọ ma bọtịnụ ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite egwuregwu ahụ. Na egwuregwu na akuku elu (mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, na-adabere na ntọala) ị ga-ahụ nọmba odo - nke a bụ nọmba FPS (ma ọ bụrụ na ị hụghị, pịa igodo dị ọkụ nke anyị debere na nkwụsị mbụ).
N'elu aka nri (aka ekpe), ọnụ ọgụgụ FPS na egwuregwu ahụ gosipụtara na nọmba odo. Na egwuregwu a - FPS bụ 41.
Ihe kwesịrị ịbụ FPSigwu egwu (n'enweghị lags na brakes)
E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ebe a, ọtụtụ echiche ha
N'ozuzu, ọnụ ọgụgụ nke FPS - ka mma. Ma ọ bụrụ na ọdịiche dị n'agbata 10 FPS na 60 FPS hụrụ onye ọhụụ site na egwuregwu kọmputa, mgbe ahụ ọdịiche dị n'agbata 60 FPS na n'agbata 120 FPS abụghị onye ọ bụla nwere ahụmahụ nwere ike imepụta! M ga agba mbọ zaa ajụjụ a, n'ihi na m na-ahụ ya onwe m ...
1. Ụdị egwuregwu
Nnukwu nnukwu ihe dị na ọnụ ọgụgụ FPS na-eme ka egwuregwu ahụ n'onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nke a bụ ụdị atụmatụ, ebe enweghị mgbanwe na ngwa ngwa na odida obodo (dịka ọmụmaatụ, usoro nzọụkwụ site na ntinye), mgbe ahụ ị nwere ike igwu egwu nke ọma na 30 FPS (na ọbụlagodi). Ihe ọzọ bụ onye na-agba ọsọ ngwa ngwa, ebe nkwụpụta gị dabeere kpọmkwem na mmeghachi omume gị. Na egwuregwu a - ọnụ ọgụgụ nke okpokoloji nke na-erughị 60 nwere ike ịpụta mmeri gị (ị ga-enweghị oge iji meghachi omume na mmegharị nke ndị ọzọ egwuregwu).
Ọ na-edekwa ụdị ụfọdụ nke egwuregwu: ọ bụrụ na ị na-egwu na netwọk ahụ, ọnụ ọgụgụ nke FPS (dịka iwu) kwesịrị ịdị elu karịa otu egwuregwu ọ bụla na PC.
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo LCD monitor (ha na-aga na ọtụtụ 60 Hz) - mgbe ọdịiche dị n'agbata 60 na 100 Hz - ị gaghị achọpụta. Ihe ọzọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-ekere òkè na ụfọdụ egwuregwu ịntanetị na ị nwere nyochaa na 120 Hz - mgbe ahụ, ọ bara uru ịbawanye FPS, ọ dịkarịa ala ruo 120 (ma ọ bụ obere elu). Eziokwu, onye na-egwu egwuregwu n'egwuregwu - ọ maara karịa ihe m ga-eme.
N'ikpeazụ, maka ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu, 60 FPS ga-adị mma - ma ọ bụrụ na PC gị ewepu ego a, mgbe ahụ, ọ dịghị ebe ọ bụla ị ga-esi squeezing ya ọzọ ...
Otu esi eme ka ọnụ ọgụgụ FPS dị na egwuregwu
Ajụjụ dị mgbagwoju anya. Eziokwu bụ na a na-ejikọkarị FPS dị ala na ígwè na-adịghị ike, ọ dịkwa ka ọ ga-ekwe omume ịmalite FPS site na nnukwu ego site na ígwè na-adịghị ike. Ma, niile otu, ihe nwere ike ịbụ uzommeputa n'okpuru ...
1. Nhichapu Windows site na "mkpofu"
Ihe mbụ m na-akwado ime bụ ka ihichapụ faịlụ faịlụ, ndekọ ndenye na-adịghị mma, na ntụgharị site na Windows (nke na-emepụta ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ị dịghị ọcha usoro ahụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ọnwa). Jikọọ isiokwu dị n'okpuru ebe a.
Mee ngwa ngwa ma dozie Windows (ụlọ ọrụ kachasị mma):
2. Ọsọ ọsọ nke kaadị vidiyo
Nke a bụ usoro dị irè. Eziokwu bụ na na onye ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo, na-emekarị, enwere ntọala kachasị mma, nke na-enye ogo foto. Ma, ọ bụrụ na ịtọ ntọala pụrụ iche nke belata ogo (mgbe ọ na-adịghị ahụ anya) - mgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ FPS na-etolite (ọ dịghị ihe jikọrọ ya na overclocking)!
Enwere m isiokwu abụọ na blog a, m nwere ike ịgụ ya (njikọ n'okpuru).
AMD Acceleration (ATI Radeon) -
Ọganihu nke Kaadị Nvidia Video -
3. Na-ekpuchi kaadị vidiyo
N'ikpeazụ ... Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ nke FPS adịlarị ntakịrị, ma mee ka egwuregwu ahụ dịkwuo elu - ọchịchọ ahụ adịghị efu, ị nwere ike ịnwa iji kpuchie kaadị vidiyo ahụ (na-emeghị ihe ọjọọ enwere ihe ize ndụ iji kwata ngwá ọrụ ahụ!). A kọwara nkọwa banyere overclocking n'okpuru n'okpuru isiokwu m.
Na-ekpuchi kaadị vidiyo (nzọụkwụ site na nzọụkwụ) -
Na nke a, enwere m ihe niile, onye ọ bụla nwere egwuregwu dị mma. Maka ntụziaka banyere FPS ụba - M ga-enwe ekele dị ukwuu.